अमेरिकामा लुकेको भनिएकी उपमेयर दर्शनालाइ २०१७ मै डिभी परेको रहेछ ! – Khabarhouse
अमेरिकामा लुकेको भनिएकी उपमेयर दर्शनालाइ २०१७ मै डिभी परेको रहेछ !
Khabar house | १२ माघ २०७६, आईतवार ०४:४१ | Comments
काठमान्डौ : दर्शना नेपाली। जो तत्कालिन नेकपा माआवादीबाट तिला गुफा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनलाई गाउँलेहरु दन्ता भनेर चिन्छन्। तर, पार्टीमा भने उनी कमरेड दर्शना हुन् । दन्ता नेपाली उर्फ कमरेड दर्शना। उनी १७ अक्टोबर २०१९ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिकाको न्युयोर्क सहरका लागि उडिन्, नेपाल नगरपालिका संघले गराएको अमेरिका भ्रमणमा।
यो उनलाई चिन्ने सबैले थाहा पाएका थिए। त्यस बाहेक आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् तिलागुफा नगरपालिकाका मेयर रतनबहादुर शाही। ‘अमेरिका गएपछि सम्पर्क भएन। एक हप्ताको कार्यक्रम भनेर जानु भएको हो। त्यो बाहेक केही खबर छैन। अहिले त तीन महिना पुगिसक्यो। साथीहरुले कुरा गर्दा बिरामी छु भन्नुहुन्छ रे। हाम्रो केही सम्पर्क भएको छैन। गर्न खोज्दा पनि रिप्लाई आउँदैन।’
जम्मा एक साताका लागि उडेकी उनी हालसम्म अमेरिकामै छन्। केही समय बिरामी छु भनेकी उनले एक दिन आफूलाई साह्रै गाह्रो भयो भनेर म्यासेन्जरमा कल गरेको तिला गुफा नगरपालिका वडा नं ४ का अध्यक्ष खड्कराज शाही बताउँछन्। ‘अक्टोबर अन्तिम तिर कम्बरको नसा च्यापियो म बाँच्दिनँ जस्तो छ, भन्नुभएको थियो। त्यसबेला अनुहार सुनिए जस्तो थियो। कपाल काटेको थियो।
बिरामी जस्तै लाग्यो। तर पछिल्लो समय म्यासेन्जरमा कुरा गर्नु हुन्न। कुनै रिप्लाई आउँदैन। उहाँ अनुपस्थित भएपछि समस्या भएको छ,’ उनले भने ‘खास केमा गएको हो हामीलाई पूरै थाहा छैन। जाँदा न्यायिक समितिको काम कारबाही कार्यबाहक भएर चलाउनु भनेर तिलक न्यौपानेलाई सानो कागज छोडेर गएकोसम्म थाहा छ।’ अहिले उनको अवस्थाबारे केही जानकारी छैन।
उनी अमेरिका पुगेपछि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएको फोटो फेसबुकमा सार्वजनिक छन्। तर, उनले नोभेम्बर १६ मा फिलिङ सिकको साइनमा एक शब्दको स्टाटस लेखेकी छिन ‘उफ..त्यसपछि उनी फेसबुकमा निष्क्रिय छिन्। तर, उनलाई अहिले अमेरिका मै हराएको आरोप लागेको छ। माघ ९ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अनुपस्थित भए पछि उनीबारे थप टीका टिप्पणी भइरहेको छ।
अधिकांशको नजरमा उनी अमेरिकामै लुकेर बसिन् भन्ने छ । उनको पार्टीका नेताहरु पनि त्यही निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसै बीच उनी सदस्य रहेको नेकपा तिलागुफा नगर समितिले मंसिर ११ गते नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष दिनेश चनराले बताए। ‘हामीले निर्णय गरे पनि माध्यम नभएकाले पठाउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् पहल गरिदिन भनेर मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छौ।
उहाँले गर्दा अहिले बहुत ठूलो समस्या आइरहेको छ।’ उनले पठाएको खबर अनुसार उनी बिरामी भन्ने देखिन्छ। तर, हालसम्म पनि कुनै खालको औपचारिक जानकारी नआएकाले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ । उनी उतै रहेको खबर पाए पछि जनावरी १४ मा उनको म्यासेन्जरमा बुझ्न खोज्दा जवाफमा, ‘म दर्शना होइन,उहाँको साथीको बहिनी हो। उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ।
बोल्न सक्नु हुन्न। बेकार तनाब नदिनुहोला। उपचार राम्रो भइरहेको छ।’ भन्ने जवाफ आयो। जनवरी १५ मा उनको म्यासेन्जरबाट एउटा बिरामी भएको फोटो पठाएकी छिन्। थप जनकारी लिन खोज्दा बोलिनन् भने हालसम्म पनि कल रिसिभ भइरहेको छैन । अर्का को म्यमसेन्जर किन चलाएको भनी गरिएका प्रश्नको उत्तर, ‘उहाँको घरतिर सम्पर्क गर्नको लागि चलाएको’ आयो। तर,यतिले पत्याउने आधार पुग्दैन।
शनिबार राति फेरि उनको म्यासेन्जरमा सत्य कुराको जानकारी दिनुस् भनी गरिएको अनुरोधको जवाफमा उनको म्यासेन्जरबाट, ‘दर्शना दिदीको अब ला’सको समाचार बनाउनुहोला। तपाईहरुले गर्दा आज झन् दिदीको अवस्था ना’जुक छ। बे’होस हुनुहुन्छ।’ भनेर रोएको सिग्नलमा प्रतिक्रिया पठाइन्। तर, फेरि पनि कल रिसिभ भइरहको छैन। उनी यथार्थ जानकारी दिन चुकेकी छन्।
उनी अमेरिका भ्रमणमै रहेकै बेला बाह्रबिसे नगरपालिका सिन्धुपाल्चोककी उपमेयर सुशीला पाख्रिन तामाङलाई जन्मदिनको शुभ कामना दिएकी छिन् । हामीले तामाङलाई फलो गर्दा उनले नोभेम्बर २० मा आफू कोरियामा रहेको बेला भिडियो कल भएको जनकारी दिइन्। ‘सुरुमा त अब फर्किन्छु भन्नुभयो। ११ मिनेट १८ सेकेन्ड कुरा भएको हो। अनुहार हेर्दा त्यस्तो केही समस्या थिएन।
बिहे गर्न लागेको भन्दै जिस्किएको जस्तो कुरा गरिरहनु भएको थियो ।’ उनले भनिन्, ‘उहाँलाई केही त्यस्तो केही नहोस्। हामी भगवानसँग प्रार्थना गरौं। यदि उहाँ नियतबस उतै बसेको हो भने यो जनमतको अपमान भयो ।’ दर्शनालाई नेपाल नगरपालिका संघले भ्रमणको लागि अमेरिका पठाएको हो। संघका कलानिधि देवकोटाले यो पहिलो घटना भएको बताए। ‘उहाँसँगै गएका अरु दुई जना साथी फर्किसके।
उहाँहरुले सम्पर्क गर्दा बिरामी छु भन्नुभएको हो रे।’ उनले भने, ‘एक महिना अगाडि उहाँसँग सम्पर्क गर्दा म बिरामी भएँ। यहाँ एउटाको शरणमा छु भन्नुभयो। तर कसको शरणमा भनेर खुलाउनु भएन । केही त्यस्तो समस्या भए हामी दूतावासमा सम्पर्क गरौंला, सहयोगको लागि पहल गरौंला भन्दा आवश्यक परे भन्छु भन्नुभयो। हामीले सामान्य रुपमै लियौं। त्यसबाहेक अरु केही सम्पर्क भएको छैन।
मलाई कर्णालीका नेताले फोन गरेर हैरान दिएका छन्।’ उनी आफूले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन्। बरु माघ ९ गते उनले दिनभर फेसबुक डिएक्टिभ गरिन्। यसैबीच उनका भाइ कविराज नेपालीले उनका बारेमा आएका खबरहरुको खण्डन गर्दै उल्टै प्रश्न गरेका छन्, ‘२०१७ मा डिभी परेको हो। डिभी पर्दा त जानुभएन भने अहिले किन उतै बस्न चाहनु हुन्थ्यो र ?’ तर, दर्शना अमेरिका बस्न लालयित भएको देखिन्छ।
अखिल क्रान्तिकारीकी चल्तापुर्जा नेता, देश प्रेमले ओतप्रोत भनिएको अवस्थामा उनले डिभी भरेकी थिइन्। यसरी डिभी भर्नु अमेरिका जाने महत्वाकांक्षा नै हो। उनलाई डिभी चिठ्ठा पनि पर्‍यो । त्यहीबेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन उनी तिलागुफा आइन्, उपमेयरको टिकट पाइन् र जितिन् पनि । दर्शना कमरेड अमेरिका नगएर गाउँ आइन् भन्ने खालका समाचार आए। उनले राम्रै चर्चा बटुलिन्।
सन् २०१७ को डीभीबाट अहिले अमेरिका जान मिल्दैन तर उतिबेला सबै प्रक्रिया पूरा गरेको हो भने मिल्ने सम्भावना रहन्छ । लाग्छ, जौमतीकी छोरीको लिटमस पेपर टेस्ट भैरहेको छ। उनी अहिले पनि ल्यावमा छिन् । नतिजा नकारात्मक दिशातिर मोडिएको छ। जति सक्दो उनले यथार्थ जनकारी दिएर आफू माथि लागेका आ’रोप मिथ्या भएको र आफू साँच्चिकै बिरामी भएको जानकारी दिन सकिन भने उनको ल्याबको रिजल्ट सकारात्मक निस्किने छ। त्यसबेला उनकी आमा जौमती छोरीले राम्रो काम गर्नेमा ढुक्क थिइन्।